Daahir Riyaale oo galabta dalka ku soo laabtay, kana xogwarramay dalxiiskiisii Faransiiska, Jarmalka iyo Ingiriiska | Somaliland.Org
September 28, 2008	Hargeysa (Somaliland.org) – Hoggaamiyaha xukuumadda KMG ka ah ee Somaliland, mudane Daahir Riyaale Kaahin ayaa galabta dalka ku soo laabtay, isaga oo ka soo kicitimay dalka Ingiriiska oo uu ku soo gebagebeeyey booqasho laba toddobaad ah oo u soo maray saddex dal oo Yurub ah. Waxana uu xaqiijiyey in dalxiiskiisaas Faransiiska iyo Ingiriisku uu la xidhiidho “la-dagaalanka Budhcad-badeedda xeebaha Soomaaliya”.
Mudane Riyaale, isaga oo ugu horrayn ka hadlaya Faransiiska oo uu booqashadiisa ka bilaabay, waxa uu yidhi, “Faransiiska waxaanu la kulanay la-taliyaha Madaxweynaha ee Arrimaha Afrika oo muhiim ah oo aanay wadamada kale ee Yurub lahayn, kaas oo ah nin awood gaara leh oo aanu kula kulanay Madaxtooyada Faransiiska lafteeda. Waxaanu iska waraysanay xaalada mandaqada iyo Faransiisku waxa uu inala qaban karo. Waxaan u arkay kulankayagaas runtii way ogolaayeen qolada Faransiisku in ay wax inala qabtaan. Waxa kale oo aanu la kulanay nin u qaabilsan Faransiiska Arrimaha Afrika iyo Indian Ocean (Badweynta Hindiya), falanqayn badan ayaananu ka wada galay xaga budhcad-badeeda iyo Faransiisku muxuu inala qaban karo.”
Waxana uu intaas ku daray in Faransiisku uu ballanqaaday inuu Somaliland wax kala qabanayo xagga dhaqaalaha, maadaama ayuu yidhi, uu Guddoomiye u yahay Midowga Yurub. Waxa kale oo uu sheegay in Faransiisku uu had iyo goor Somaliland ku xisaabiyo Soomaaliya, taas oo uu sheegay in uu kala hadlay dowladda Faransiiska in aanay xaq ahayn in Soomaaliya ay wada qaadato wixii Somaliland la lahayd, isla markaana wixii dembi ah ee Soomaaliya la timaaddo lala wadaajiyo Somaliland.
Mudane Riyaale, socdaalkiisa oo uu Faransiiska Jarmalka iyo Ingiriiska, waxa uu sidoo kale sheegay in uu la kulmay masuuliyiin iyo hay’ado ka tirsan dowladda Ingiriiska oo qaabilsan socdaalka iyo ammaanka marinada badda, isla markaana uu kala xaajoodey sidii Somaliland aan loogu qasi lahayn Soomaaliyada budhcad-badeedda iyo colaaduhu aafeeyeen.
“Ingiriiska hawl muhiim ah ayaan u tegay. Waatan Baddii cakiran ee Budhcad badeedu ay ku badatay, dhibaatada ka jirtaana waxa weeyaan in Maraakiibtii la yidhaahdo Soomaaliya lama tagi karo. IMO waanu la kulanay, waxaanu kala hadalnay in inaga iyo Koonfurta Soomaaliya laba la inoo kala arko, waxaanad moodaa in ay dadkani inta badan ku shaqeeyaan go’aano UN-ta ka soo baxa oo Soomaaliyana meel ay ku taalo aanay garanayn,” ayuu yidhi mudane Riyaale.
Waxana uu intaa ku daray oo uu ku dooday in wadahadalkaa ku saabsan in Somaliland iyo Soomaaliya la kala saaro ee uu la yeeshay hay’adahaas Ingiriiska ee qaabilsan socdaalka baddu ay tahay fursad suuragelinaysa in la kala ogaado Somaliland iyo Soomaaliya.
Dalka Jarmalka, mudane Riyaale, waxa uu sheegay in laba maalmood uu u joogey arrimo caafimaad. Sidoo kale, waxa uu sheegay in Jimcihii oo uu soo gaadhey Addis Ababa, uu halkaa kulamo kula yeeshay madax sare oo ka tirsan dowladda Itoobiya, isla markaana ay ka wadahadleen xaaladda mandaqadda Geeska Afrika. Waxana uu xusay inuu si gaar ah mar ugu noqon doono Addis Ababa.
Daahir Riyaale, waxa uu qiray warar soo baxay intii uu ku gudajirey socdaalkiisa oo sheegayey in dowladda Somaliland gacan ka siisay ciidamada Faransiiska ee saldhigoodu yahay Jabuuti weerarro ay dhowaan ku qaadeen, kuna soo qabqabteen budhcad badeed Soomaali ah oo Maraakiib Faransiisku leeyahay afduub ugu haystey xeebaha Soomaaliya.
Mudane Riyaale oo warbixintiisa kadib ay weriyayaashu su’aalo weydiiyeen, isaga oo ka jawaabaya su’aal ahayd, faa’iidada dhaqaale, siyaasadeed iyo difaac ee Somaliland ugu jirta ama ay ka heshay gacanta ay ka geysato hawlgalada la-dagaalanka Argagixisada ee caalamka ka socda iyo weliba la dagaalanka Budhcad-badeedda Soomaaliya oo la sheegay in Dekedda Berbera loo isticmaalay laba hawlgal oo ciidamada Faransiisku ku weerareen Budhcad-badeed Soomaali ah, waxa uu yidhi, “Horta aduunkan aan ku noolahay waxyaabo badan siyaabaha aynu u haysano uma jiraan. Matalan haddaynu u haysano inaynu inagu wax badan oo fiican qabsanay, inaka ayaa qabsanay, taa waxba la inagu siin maayo. Laakiin, waa lagama maarmaan in aynu abuurno dano (interest) dadyawgaa inaga dhaxayn kara oo aynu wada qabsan karno. Waa ka mid haddaanu ka qaybgallo dagaalka Budhcad-badeedka oo aan qaybteena ka dagaalano, waxyaabaha danaha inoo abuuraya ayaanay ka mid yihiin”.
“Faransiiska oo kale runtii waxaan odhan karaa iyaga ayaa ugu geesisan oo la dagaalamayba, qolyaha kale way agjoog-joogaan baan odhan karaa. Qolyahaa waxa inooga iman doona wufuud Faransiiska, haddii Illaahay yidhaahdo mustaqbalka, wakhtiga imika ma sheegayo,” ayuu raaciyey.
Sidoo kale, waxa la weydiiyey, waxa Somaliland ka faa’iidey labadii hawlgal ee Faransiisku ku soo qabqabteen Budhcad badeedda ee la sheegay in ay u isticmaaleen Dekedda Berbera, waxana uu ku jawaabey, “Faransiiska in aynu wax kala iibsano waa daruuri, laakiin maalin keliya wax laguma kala iibsado. Haddaad maalin iyo laba adigu gacan geysato way iska iman doontaa faa’iidadu. Markaa yaan la deg-degin ayaan odhan lahaa”.
Dhinaca kale, intii mudane Riyaale ku jirey socdaalkan waxa soo baxay warar sheegaya in dowladda Faransiiska uu ka qaatay lacag dhan $3.5 (Saddex Milyan iyo Badh Doollar) oo loo siiyey abaalmarin gacantii uu ka siiyey ciidamada Faransiiska hawlgaladii ay ku soo furteen maraakiibtii Budhcad badeedda Soomaalidu ku haysatey xeebaha Soomaaliya.